Israel Oo Dhulka Hoostiisa Ka Dhisaysa Gidaar, Si Aanay Dhanka Falastiin Looga Soo Weerarin - Wargane News
Home Somali News Israel Oo Dhulka Hoostiisa Ka Dhisaysa Gidaar, Si Aanay Dhanka Falastiin Looga...
Waxa Uu Ka Dambeeyey Dagaalkii 50-Ka Maalmood Socday Ee Ay Xamaas Kaga Fal-Celisay Duullaankii 2014-Kii Ay Israa’iil Ku Qaadday Marinka Qasa, Kaasi Oo Ay Falastiiniyiintu U Isticmaaleen Waddooyin Dhulka Hoostiisa Ah.
Dawladda Israa’iil ayaa dardargalineysa mashruuc ay ku kacayso lacag dhan $833 milyan oo doolar oo lagu dhisayo darbi dhulka hoosta ugu jira 40m, korna ah 6m, kaasi oo ujeeddada laga leeyahay tahay in dagaalyahanada Xamaas ee Qasa lagaga hor istaago in ay isticmaalaan godad dhulka hoostiisa ah. Dagaalkii 50-ka maalmood socday ee dhacay sannadkii 2014-kii kadib duulaankii Israa’iil ay ku qaadday marinka Qasa ayaa waxaa dhacday in dagaalyahanada Xamaas ay isticmaaleen waddooyin ay ka jeexdeen dhulka hoostiisa, kuwaasi oo ay u isticmaalayeen in ay weeraro ka geystaan Israa’iil gudaheeda. Dagaalkaasi ayaa waxaa lagu diley 2,251 qof oo falastiiniyiin ah, 1,462 ka mid ah ay shacab yihiin sida ay sheegtey Qaramada Midoobey. Dhanka Israa’iil waxaa kaga dhimatay 67 askari iyo 6 qof oo rayid ah, halka la dhaawacay 1,600 qof. Jeneraal ka tirsan ciidamadda Milletariga ee Israa’iil oo lagu magacaabo Jeneraal Eyal Zamir oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegey in darbiga uu noqon doono mid lagu rakibay qalab casri ah, Ujeeddaduna tahay in lagaga hortago Xamaas. Darbiga ayaa waxaa xitaa la gadhsiinayaa illaa qeyb ka mid ah badda Mediterranean-ka si xitaa looga hortago in dhankaasi badda laga soo wareegto. Darbiga ayaa waxaa ku rakiban qalab casri ah oo bixinaya digniin haddii dhulka hoostiisa laga qodayo wax god ah. Go’doominta ay Israa’iil saartay marinka Qasa ayaa waxa uu horseedey in shacabka Falastiin ay isticmaalaan godad dhulka hoostiisa ah si ay dalka Masar uga keensadaan badeecadaha daruuriga ah. Balse sidoo kale godadka dhulka hoostiisa waxaa isticmaala kooxaha Xamaas ka mid tahay.